ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့ ပတ်သက်မှုရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေအတွင်း တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တစ်ချို့က မူဆလင်တွေကို သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မီးလောင်ရာ ကျေးရွာတွေက ထွက်ပြေး သူတွေကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် HRW အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားပြီး အေအက်ဖ်ပီ သတင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူမြို့က အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာဆိုရင် ကမန် မူဆလင်တွေကို ဒေသခံတွေက တိုက်ခိုက်မှုမှာ အစိုးရ လုံခြုံရေးတပ်တွေက ကာကွယ်တားဆီးမှု ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ HRW အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ချက်ကို အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနက ရေးသားထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုမှာ မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေ အများစု နေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာအတော်များများရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဂြိုလ်တုကနေတဆင့် ရိုက်ကူးယူထားတာကိုလည်း HRW အဖွဲ့က ဖေါ်ပြထားကြောင်း HRW အဖွဲ့ရဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း သမ္မတ အိုဘားမား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
HRW အဖွဲ့ရဲ့ ကြေငြာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရှဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Phil Robertson ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးဝင်းနိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
Security persons and arkan buddis was killed Muslims about 55000
"Security person who killed people" DFrom whom that new got, notamuslim? They always given one side heavier information. Whithout reason nobody killsaperson easily, becauseastrong reason. Actually go to stay togather asanative host people, you will understand. Stop express the information from illegal muslin people. It's oneside discremination, suspress host suffering people, encourage the terrorist, and what about the2Burmese Engineer soldiers whom they have been kidnapping.
မကျေနပ်ရင် မင်းတို့ခေါထားလေ။ မင်းတို့ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှသိမယ်
HRW က အကောင်တွေ မင်းတို့ပထွေးကုလားတွေ သတ်လို့
ရခိုင်တွေ သေတာကြတော့ မင်းတို့အကောင်တွေ မပြောပါလား..? မင်းတို့ပြောနေတဲ့လူ့အခွင့်ရေးတွေ ဒေသ
ခံ ရခိုင်တွေမှာကော မရှိတော့ဘူးလား .. ? မင်းတို့အကောင်တွေ ထမင်းစားရင်တော့ စဉ်းစားတတ်ပါလိမ့်မယ် ..